Precision Granite Solutions Vagadziri & Vatengesi - China Precision Granite Solutions Factory
Precision Granite Tri Square Mutongi
Tichivavarira pamberi peyakajairika indasitiri maitiro, isu tinoedza kuburitsa yepamusoro mhando girenayiti mativi mativi. Uchishandisa yakanakisa Jinan nhema girenayiti sechinhu chisina kugadzirwa, iyo chaiyo granite mativi mativi akaenzana anoshandiswa zvakanaka kuongorora iwo matatu marongedzo (kureva X, Y uye Z axis) yedhisheni yedata yezvinhu zvakagadzirwa. Basa reGranite Tri Square Mutongi rakafanana neGranite Square Mutongi. Inogona kubatsira muchina wekushandisa uye michina yekugadzira mushandisi kuti aite kurudyi kukona kuongorora uye kunyora pazvikamu / zvekushandira uye kuyera zvakaringana zvezvikamu.
Granite V-Block inonyanyo shandiswa mumashopu, maturusi makamuri & akajairwa makamuri emhando dzakasiyana dzekushandisa mukushandisa uye kuongorora zvinangwa sekumaka nzvimbo dzakaringana, kutarisa kunetseka, kuenzanisa, nezvimwe. Granite V Zvidhinha, zvinotengeswa seyakaenzana vaviri, bata uye kutsigira zvidimbu zve cylindrical panguva yekuongorora kana kugadzira. Ivo vane zita rekuti 90-degree "V", rakanangana uye rakaenzana kuzasi uye mativi maviri uye mativi kusvika kumagumo. Ivo anowanikwa mune akawanda masize uye akagadzirwa kubva kwedu Jinan nhema girenayiti.
Granite Yakarurama Mutongi ine 4 chaiyo nzvimbo
Granite Straight Ruler inonziwo Granite Straight Edge, inogadzirwa naJinan Black Granite ine yakanakisa ruvara uye Ultra yakanyanya kurongeka, ine kupindwa muropa kwepamusoro chaiyo mamakisi kuitira kugutsa zvese zvakasarudzika zvinodiwa nemushandisi, zvese mumusangano kana mune metrological kamuri.
Tinogona kugadzira chaiyo granite yakafanana neakasiyana saizi. 2 Chiso (chakapedzwa pamakona akatetepa) uye 4 Chiso (chakapedzwa pamativi ese) shanduro dziripo seGiredhi 0 kana Giredhi 00 / Giredhi B, A kana AA. Kufanana kweGranite kwakakosha kwazvo pakuita machining setups kana zvakafanana panotorwa chidimbu cheyedzo pane maviri akapfava uye akafanana nzvimbo, zvichinyanya kugadzira ndege yakati sandara.
Dema girenayiti pamusoro pamahwendefa anogadzirwa mukukwirira kwakaringana maererano nekutevera zviyero, nekupindwa muropa nemhando yepamusoro mamakisi kuitira kugutsa zvese zvakanangwa nemushandisi zvido, zvese mumusangano kana mune metrological kamuri.
Michina yekuwedzera uye yakanyatsogadzirwa inogadzirwa neyakajairwa granite nekuda kweiri nani panyama zvivakwa. Granite inogona kuchengeta yakanyanya kunyatsoita kunyangwe patembiricha yemukati. Asi preicison Metal muchina mubhedha uchakanganiswa netembiricha yakanyatsojeka.
Nemazvo Granite Mhepo Kupa
Iyo girenayiti inotakura mweya ine zvakanakira kukwirira kwakaringana, kugadzikana, abrasion-proof uye ngura-chiratidzo chegranite pevhu ndiro.
Isu tinopa iyo chaiyo chaiyo granite cubes ine yakanyanya dziviriro pasuru, hukuru uye chaiyo giredhi zviripo zvinoenderana nechikumbiro chako.
Nemazvo Granite Dial Base
Iyo Dial Comparator ine Granite Base ibhenji-mhando enzanisa gage iyo ine ruggedly yakavakirwa kuitira mu-kuita uye kwekupedzisira basa rekuongorora. Iyo dial dial inogona kugadziriswa yakatwasuka uye kukiyiwa mune chero chinzvimbo.
Granite Square Mutongi ane mana chaiwo huso
Granite Square Vatongi vanogadzirwa mukukwirira kwakaringana maererano nekutevera zviyero, nekupindwa muropa nemhando yepamusoro mamakisi kuitira kugutsa zvese zvakasarudzika zvinodiwa nevashandisi, zvese mumusangano kana mune metrological kamuri.
ZHHIMG matafura ari vibration-akaisirwa nzvimbo dzebasa, anowanikwa aine rakaoma tafura yematombo kana yepamusoro tafura yepamusoro. Kuvhiringidza kudengenyeka kubva kune zvakatipoteredza zvakasungirirwa kubva patafura zvine yakanyanya-inoshanda membrane mweya chitubu insulators nepo pneumatic yekumisikidza zvinhu zvinoramba zvakaringana padanho petafura. (± 1/100 mm kana ± 1/10 mm). Zvakare, chikamu chekuchengetedza cheakakomberedzwa-mhepo kutonhodza chakasanganiswa.
Precision Granite Square Mutongi, Nemazvo Granite, Nemazvo Granite Kufanana, Nemazvo Granite Surface Plate, Nemazvo Granite Cube, Epoxy Concrete,